Latest News	HomeAbout MyanmarGEOGRAPHYCLIMATEPOPULATIONRELIGIONLANGUAGECULTUREHISTORICAL BACKGROUNDAbout UsMYANMAR HOTEL AND TOURISM LAWDuties and Responsibilities of the DepartmentsBilateral Tourism AgreementsTourism Investment EnvironmentGuide to Investment and Doing BusinessBusiness EnvironmentBusiness OrganizationDirectives for Coastal Beach AreasAdministration and Finance Department (DHT)Hotels and Tourism Supervising DepartmentInternational & Regional Cooperation Department (DHT)Latest NewsDestinationFestivalsDestinationIntroducing MyanmarGOLDEN SMILESNATIONALITIESGOLDEN SIGHTSGOLDEN ARTSGOLDEN OPPORTUNITIESPUTAOEco-TourismKakaborazi ParkMyaing Hay WunIndawgyi Lake SanctuaryNat Ma Taung National ParkMeinmahla KyunZoological GardensAlungdaw Kathapa National ParkHlawaga ParkPopa Mountain ParkShwesettaw SanctuaryInlay LakeSein-Ye Forest CampChatthin SanctuaryBotanical GardensMoneyingyi WetlandTourist InformationDOs & DON'TsPERMITTED AREASUseful LinkHelpful NumbersEmbassyMyanmar Embassies AbroadForeign Embassies in MyanmarE-VisaTourism PoliceSERVICESHOTELS & RESORTSTOUR COMPANIESTOUR GUIDECRUISES & YACHTS COMPANIESCarTourist TransportFlight SchedulesAirlines in MyanmarLinks of the airline websitesDomestic Train SchedulePUBLICATIONHANDBOOKSVisitors' GuideTOURISM STATISTICSASEAN Tourism StandardsArticles (Englsih)Articles (Myanmar)Tourism BrochureVideosASEAN TOURISMVisit Asean@50IndonesiaPhilippinesSingaporeThailand
H.E. the Union Minister U Htay Aung met General Managers and Managers in- charge of hotels from Nay Pyi Taw Hotel Zone at the Jade Hall meeting room Print Email June 18, Nay Pyi Taw
H.E. the Union Minister U Htay Aung met General Managers and Managers in- charge of hotels from Nay Pyi Taw Hotel Zone at the Jade Hall meeting room at the Ministry of Hotels and Tourism in Nay Pyi Taw on Wednesday.
At this meeting, H.E. the Union Minister said the hotel service industry in Nay Pyi Taw is now well developed to host Government Summits and Conferences providing high class accommodation and facilities for official representatives. But we need to encourage some more projects to be completed in time and to provide other premium services. He stressed that trainings will be provided in collaboration with the Ministry of Hotels and Tourism because human resource development is vital for the industry. Director General U Aung Zaw Win gave further suggestion to the hotels at this meeting.
In the afternoon, H.E. the Union Minister attendedacoordination meeting with Myanmar Tourism Federation and member associations in which he deliveredaspeech for the implementation of suggestions made by MTF and member associations to the respective Ministries.
In his speech, he said that the 2nd National Tourism Development Central Committee will be held soon and the suggestions and reports made at the 1st NTDCC meeting by MTF and member associations to respective Ministries and the responses from them have been submitted to the Chairman (Vice President of Myanmar) by MOHT. The progress and completion of work written in the reports will be reviewed and discussed in this meeting.
The meeting concluded withadiscussion of the reports from representatives of the respective Ministries.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင် နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ်များမှ အထွေထွေမန်နေဂျာများ၊ မန်နေဂျာများနှင့်တာဝန်ခံများအား တွေ့ဆုံမှာကြား
နေပြည်တော် ၊ ဇွန်လ ၁၈ရက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ်(၃၃)၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျောက်စိမ်းခန်းမ၌ နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ ဟိုတယ်များမှ အထွေထွေမန်နေဂျာများ၊ မန်နေဂျာများနှင့် တာဝန်ခံများအား တွေ့ဆုံမှာကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ပြောကြားရာ၌ ယခုအခါ နေပြည်တော်တွင် ဟိုတယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ပြည့်စုံလာပြီဟု ဆိုနိုင် ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတော်အဆင့် အစည်းအဝေးနှင့် ကွန်ဖရင့်များ ကျင်းပလာနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တော် များ တည်းခိုနေထိုင် ရန်အဆင့်မြင့်နေရာထိုင်ခင်းနှင့် အသုံးအဆောင်များ ရှိလာပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အချို့မှာ ဒုတိယ အဆင့်စီမံကိန်းများ အချိန်မီပြီးစီးရန်လိုအပ်သည့်အတွက် ယခုကပင် အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ကိုင်သွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အခြားအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများလည်း အဆင်သင့်ဖြစ်စေလိုပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ အရေးကြီးသဖြင့် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်မှုကို ၀န်ကြီးဌာနနှင့် အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ဇော်ဝင်းက လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်မှာ ကြားပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ နီလာအစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ် သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်အသင်းများမှ အကြံပြု တင်ပြချက်များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် ဆက် လက်ဆောင်ရွက် မည့် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားရာ၌ အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို မကြာမီကျင်းပပြုလုပ်ရန်ရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ ယခင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်အသင်းများမှ ဗဟို ကော်မတီဥက္ကဌထံသို့ အကြံပြုတင်ပြခဲ့သည့်အချက်များအပေါ် ၀န်ကြီးဌာနများမှ သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အလိုက် ပြန်လည်ဖြေကြားပေး ပို့လာသည်များရှိပါကြောင်း၊ ၄င်းအချက်များအား ဟိုတယ် နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ စုစည်း၍ ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဌ ဒုတိယသမ္မတထံသို့ ဆက်လက်တင်ပြခဲ့ ပါကြောင်း၊ အဆိုပါတင်ပြချက်များအရ တိုးတက်မှုအခြေအနေ၊ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ရန်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသော သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တင်ပြချက်များအပေါ် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြီး အစည်းအဝေးအား မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Union Minister for Hotels and Tourism attends signing ceremony on Management Agreements and UNWTO International Conference on Tourism and Heritage Protection
Print Email Nay Pyi Taw, 12 June
The signing ceremony on Management Agreements which will change the name of Thingaha Hotel (Nay pyi Taw) and Thingaha Hotel (Ngapali) 100% invested by Edin Group Co.,Ltd to Hilton Brand Hotel of Hilton Worldwide based in United States of America and to open new hotels in Bagan, Mandalay and Inlay regions took place at Strand Hotel in Yangon on 12 June. The ceremony was attended by Union Minister for Hotels and Tourism U Htay Aung, Chief Minister for Yangon Region U Myint Swe, responsible persons for American Embassy, Ministers for Yangon Region Government, Secretary for Myanmar Investment Commission, President for UMFCCI and departmental officials.
At the ceremony, President for Edin Group U Chit Khine madeawelcome speech.
Then, the Union Minister U Htay Aung delivered an address. In his address he explained that this ceremony is to strengthen the friendship between Myanmar and American. It becomesamilestone in the hotel sector and the American tourists will visit Myanmar due to Hilton Worldwide which handles 550 hotels in six Continents. Hilton worldwide is doing its business by “Travel with Purpose" in order to the benefits of local people.
Chief Minister for Yangon Region said that it gave himagreat pleasure due to the American-Myanmar business cooperation. He went on to point out that Edin group and Hilton Worldwide are to cooperate in the long run with mutual understanding and to prioritize Responsible Investment and CSR essential for the socioeconomic development of Myanmar.
Mr. Andrew Clough, Senior Vice President for Hilton Worldwide also gaveaspeech.
Then Eden Group and Hilton Worldwide signed Management Agreements.
Then Union Minister for Hotels and Tourism U Htay Aung left for Mandalay Hill Resort Hotel and attended the afternoon session of GMS Tourism Forum organized by the Ministry of Hotels and Tourism. He discussed on matters related to the systematic development of tourism in the region, conservation of the systematic development of tourism in the region, conservation and preservation of cultural heritage, development of Human Resources, promotion of service quality and promotion and advertising GMS destination.
The opening ceremony of GMS Tourism Forum and related meetings were being held from9June and Deputy Minister for Hotels & Tourism Dr. Sai Kyaw Ohn and responsible persons attended the opening ceremony of the forum which was held on 11 June morning.
The opening ceremony of the UNWTO International Conference on Tourism & Heritage Protection jointly organized by the Ministry of Hotels & Tourism, UNWTO and Mekong Tourism Coordination Office (MTCO) was held at the Mandalay Hill Resort Hotel on the 12th June morning.
In his opening remarks, Union Minister for Hotels and Tourism said that the president of the Republic of the union of Myanmar met with businessmen during his tour of Began in June 2013. During his tour, the president pointed out that the cultural heritage of Bagan is unique and Hotels & Tourism industry is developed due to this heritage. Tourism cannot be develop in the Long run if we do not conserve this cultural heritage. By this context. He highlighted that conservation and preservation of cultural heritage is very important. Union Minister continued to say that the instructions of the president is very concerned with this conference and we need to follow by his instructions. Then he explained the formation of the conference. Secretary General of UNWTO H.E Mr. Taleb Rifai visited Bagan in 2012 and there he amazed its ancient cultural heritage. During his visit, he sawaSpanish guide who explained his guests about the history of Arnanda Pagoda with Spanish Language and he praised his language skill. He then continued to Nay Pyi Taw and paidacourtesy call to the President of the Republic of the Union of Myanmar. Meeting with President, Mr. Rifai committed him to organizeaConference relating to tourism and heritage protection. In this regards, Today's conference was held jointly organized by the Ministry of Hotels & Tourism and UNWTO. Moreover, due to the concerted efforts and strategic reforms of the New Government, progress has been achieved in various areas. In Myanmar, one of the significant achievements is tourism development due to the committed efforts of the Ministry of Hotels & Tourism together with the strong support of the relevant departments and private sector. In term of tourist arrivals, Myanmar received 2.04 million visitors in 2013 and expect that the international arrivals can reach up to3million at the end of this year. In line with the increased number of tourist arrivals, infrastructure development in our country such as new roads, bridges and airports has been enhanced. The Myanmar Tourism Master Plan was approved with the support of ADB and Norwegian Government. The Government of Myanmar is implementing some projects in cooperation with the UNWTO, JICA, ADB, Hanns Seidel and Lux Development. Emphasis is being placed on raising investment in the tourism industry to ensure the development of tourism infrastructure, human resources development and service quality improvement, he said. At the same time Myanmar is adopting and practicing “Responsible Tourism Policy " to make sure conservation and preservation of heritage attractions and sustainable development of tourism industry, he added. The UNWTO developed “Global Code of Ethics for Tourism" in order to make no harm to the environment and cultural heritage and promoting the activities to follow its principles. It is important to develop plans and strategies in order to efficiently use our recourses for sustainable development of tourism in Myanmar. During this conference international and national tourism experts will discuss challenges and opportunities of sustainable tourism development and management at heritage sites and share insights and invaluable experiences on development case studies for heritage sites and protection. He noted that this conference will beafruitful and productive one for Myanmar.
After that Mr. Zhu Shanshon, Executive Director for Technical Cooperation and Services and Mr. Mason Florcence, Executive Director for Mekong Tourism Coordination Office (MTCO) also gave speeches respectively. H.E. Mr. Tith Chata, Deputy Minister for Tourism Cambodia, Mandalay Region Finance Minister Dr. Myint Kyu, senior officials for Mandalay Region Government, invited guests from tourism industry, high ranking officials from concerned ministries, delegates from tourism ministries in the GMS region, representatives from Myanmar Tourism Federation and its associations and students who attending Tourism Management Course in Mandalar Collage, altogether 150 persons attended the conference.
Trans : D.K.M.T
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဌေးအောင် Eden Group Co., Ltd နှင့် Hilton Worldwide တို့၏ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ Management Agreements လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနား၊
မန္တလေးမြို့ရှိ Mandalay Hill Resort Hotel တွင် ကျင်းပသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အမွေအနှစ်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဖရင့်(UNWTO International Conference on Tourism & Heritage Protection) သို့ တက်ရောက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဌေးအောင်သည် ဇွန်လ (၁၁)ရက်နေ့နံနက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ UMFCCI ဥက္ကဌ ဦးဝင်းအောင်၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့ Strand Hotel
Eden Group Co., Ltd မှ ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ထားသောသင်္ဂဟဟိုတယ် (နေပြည်တော်)၊ သင်္ဂဟဟိုတယ် (ငပလီ) တို့အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တွင် အခြေစိုက်သည့် Hilton Worldwide ၏ Hilton Brand Hotel များအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် Eden Group မှ ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည့် ပုဂံ၊ မန္တလေးနှင့်အင်းလေးတို့ရှိ ဟိုတယ်များကိုလည်း ဆက်လက်၍ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်
လုပ်ငန်း စီမံခန့် ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် Management Agreements များ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပထမဦးစွာ Eden Group ဥက္ကဌ ဦးချစ်ခိုင်မှ ကြိုဆိုနူတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဌေးအောင်မှ ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားရာတွင် ဤအခမ်း အနားသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာလာစေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် ထင်ရှားသောမှတ်တိ်ုင်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ Hilton Worldwide ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့် အနာဂတ်တွင် အမေရိကန်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ပိုမိုရောက်ရှိ လာမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ Hilton Worldwide သည် တိုက်ကြီး(၆)တိုက်တွင် ဟိုတယ်ပေါင်း(၅၅၀) ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ဒေသခံပြည်သူလူထု အကျိုးဖြစ်စေရန် Travel with Purpose ကဏ္ဍကို ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ များကို များစွာအထောက်အကူဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ရှင်းလင်းပြော ကြားပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေမှ ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားရာတွင် ယနေ့အခမ်း အနားသည် နိုင်ငံတကာအသိုက်အ၀န်း အထူးသဖြင့် အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စု၏ အားပေးထောက်ခံသောသဘောဖြစ်သည့် အမေရိကန်-မြန်မာ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည့်အတွက် များစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ Eden Group နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်သည့် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Hilton Worldwid တို့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်နားလည်မှုရှိရှိဖြင့် ရေရှည်လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် Responsible Investment နှင့် CSR များကိုအထူး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းစသည်ဖြင့် ပြောကြားပါသည်။
Hilton Worldwide မှ Senior Vice President ဖြစ်သူ Mr. Andrew Clough မှလည်း ဂုဏ်ပြု နူတ်ဆက် စကားပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် Eden Group နှင့် Hilton Worldwide တို့ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ Management Agreements စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဌေးအောင်သည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မန္တလေး Hill Resort ဟိုတယ်သို့ရောက်ရှိပြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာမှ ကြီးမှူးကျင်းပလျက်ရှိသော မဟာမဲခေါင်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်းဖိုရမ် ဒုတိယပိုင်း အစီအစဉ်သို့ ပါဝင်တက်ရောက်ပြီး ဒေသတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းစနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေး၊ လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ၀န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြင့်မားရေး၊ မဟာမဲခေါင် ခရီးစဉ်ဒေ သမြှင့် တင်ကြော်ငြာရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း
မဟာမဲခေါင်ဒေသ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများကို ဇွန်လ(၉) ရက် နေ့မှ စတင်ကျင်းပလျက်ရှိရာ ဇွန်လ(၁၁) ရက်နေ့နံနက်တွင် ကျင်းပသော ဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီးဒေါက်တာစိုင်းကျော်အုန်းနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် မဟာမဲခေါင် ဒေသခွဲခရီးသွားလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရုံးတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော ခရီး သွားလုပ်ငန်းနှင့် အမွေအနှစ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်(UNWTO International Conference on Tourism & Heritage Protection) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ (၁၂)ရက်နေ့နံနက်တွင် မန္တလေးမြို့ Mandalay Hill Resort Hotel ရှိ Conference Room-1 တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဌေးအောင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာမှာ
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း က နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ပုဂံခရီးစဉ်တွင် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံရာ၌ ပုဂံဒေသ၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များမှာ ထူးခြားပါကြောင်း၊ ယင်းရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ်များကို အခြေပြု၍ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း မှာ ကောင်းမွန်သော်လည်း ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိပါက ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်လည်း ရေရှည်တိုးတက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ထို့အတွက် ရှေးဟောင်း ယဉ် ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို သားစဉ်မြေးဆက် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးကြောင်း လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ၄င်းလမ်းညွှန် မှာကြားချက်သည် ယနေ့မိမိတို့ပြုလုပ်
သည့် Conferenceနှင့် အထူးသက်ဆိုင်ပြီး မှတ်သားနာယူ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ကျင်းပသည့် Conference ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၏ အခြေခံကို တင်ပြရလျှင် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ်
H.E. Mr.Taleb Rifai
သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့ရာ ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်နယ်မြေသို့ သွားရောက်လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအနေဖြင့် ပုဂံဒေသ၏ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တည်ရှိမှုကို အံ့သြ ချီးမွမ်းခဲ့ပါကြောင်း၊ အာနန္ဒာဘုရားသို့ ၄င်းရောက် ရှိစဉ် မြန်မာဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးက စပိန်လူမျိုးများအား ၄င်းတို့ဘာသာဖြင့် ဘုရားသမိုင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းနေသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရာ ၄င်းဧည့်လမ်းညွှန်၏ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဗဟုသုတပြည့်စုံမှုကို ချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုမှတဆင့် နေပြည်တော် သို့ရောက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဂါရ၀ပြုရာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ပေါကြွယ်ဝသည့်အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အမွေအနှစ်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ Conference တစ်ရပ် ကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကတိပြုပြောကြားခဲ့ရာမှ ယခု Conference ဖြစ်ပေါ်လာပါကြောင်း၊
အစိုးရသစ်၏ ညီညွတ်သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် မဟာ ဗျူဟာမြောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ကဏ္ဍစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါ ကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ အထင်ရှားဆုံးသော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု များအနက်မှတစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အခြားသောဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဟန်ချက်ညီသောကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုများကြောင့် ယခုလိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်(၂.၀၄)သန်းကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသည်(၃)သန်းခန့် ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားပါကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လမ်း၊ တံတားနှင့် လေဆိပ် စသောအခြေခံ အဆောက်အဦများကိုလည်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစနစ်တကျနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းပင်မစီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၀)ကိ်ု ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် (UNWTO), (JICA),(ADB),Hanns Seidel, Lux Development ကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များ (Development Partners) များ၏ အကူအညီဖြင့် ပင်မစီမံကိန်းပါ အချို့သောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးရေးနှင့် ၀န်ဆောင်မှုအရည် အသွေး တိုးတက်မြင့်မားရေးတို့ ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ခရီးသွား လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်းမူဝါဒ (Responsible Tourism Policy) ကိုချမှတ်ကျင့်သုံးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ UNWTO အနေဖြင့်လည်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအမွေအနှစ်များကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် များ (Global Code of Ethics) ကိုရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၄င်းကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းမှု တိုးမြင့်လာ ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မိမိတို့၏အရင်း အမြစ်များကို စနစ်တကျ အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် စီမံကိန်းများနှင့်မဟာဗျူဟာများချမှတ်သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ကွန်ဖရင့်၌ အမွေ အနှစ်ခရီးစဉ်ဒေသများတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများ၊ အမွေအနှစ်ခရီးစဉ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် သဘောထားအမြင်များနှင့် တန်ဖိုးရှိသောအတွေ့အကြုံကောင်းများကို နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက တင်ပြဆွေးနွေး သွားကြမည်ဖြစ်ရာ မိမိတို့အတွက်ရလာဒ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာမည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်းစသည်ဖြင့် ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် Mr. Zhu Shanshong၊ အမှုဆောင်အရာရှိ (နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ) နှင့် Mr. Mason Florence အမှုဆောင်အရာရှိ၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲခရီးသွား လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရုံး (MTCO) တို့မှ အမှာစကားနှင့် ဂုဏ်ပြုဝမ်းမြောက်စကားများ ပြောကြား ခဲ့ကြသည်။ အခမ်းအနားသို့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Tith Chata ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ကြူ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲနိုင်ငံများရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စား လှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် လက်အောက်ခံအသင်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မန္တလာကောလိပ်ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ စုစုပေါင်း (၁၅၀) ဦးကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Greater Mekong Sub-region (GMS) Tourism Forum held at Mandalay Hill Resort Hotel
Print Email Mandalay, 11-June
The opening ceremony of Mekong Tourism Forum 2014 with the theme of “Tourism and the Future of GMS Heritage” was held at Mandalay Hill Resort Hotel, the capital city of Myanmar, Mandalay on 11 June 2014.
At the forum, Deputy Minister for the Hotels and Tourism, Dr. Sai Kyaw Ohn delivered an address. He said that Mekong Tourism Forum 2002 was firstly held in Yangon, Myanmar and this second time celebrating as host country. Mekong Tourism Forum 2014 and 33rd GMS Tourism Working Group Meeting are held at Mandalay on9June 2014, selection of executive officer of Mekong Tourism Coordinating and Workshop for Promotion of Online Marketing in Tourism Industry were held on 10 June 2014.The UNWTO International Conference on Tourism and Heritage Protection will be held continuously on 12 June 2014.After new democracy government take the responsibility of the state, all sectors have been developed and especially in tourism sector with great momentum. Arrival of tourists to Myanmar has reached (2.04) million in 2013 compared with (1.02) million in 2011 and (93%) increased. A total of (1.2) million tourists have visited from January to May in 2014.The tourism industry is very important for sub region countries as GMS regions countries own tourism resources, colourful and different cultures are very popular in the world tourism industry. Mekong River is trade mark for all GMS region countries and called for focusing on tourism industry for the economic development of the GMS countries.
Next, acting Minister of Tourism and Sports from Thailand H.E Dr. Suwat Sidthilawi, executive officers of UNWTO Technical Cooperation and Services Mr. Zhu Shanzhong, executive offices of Mekong Tourism Coordinating Officer Mr. Mason Florence speech respectively .The ceremony was attended by officials from Mandalay region high level government officers, delegates from GMS and Myanmar Tourism Federation, students from Mandalar college of Tourism Management course totaling over (170).
And then, Deputy Minister for Ministry of Hotels and Tourism, Dr. Sai Kyaw Ohn and delegates from Mekong Sub region countries opened the souvenir and local food staff shops by cutting ribbon.
မန္တလေး ဇွန် ၁၁
မဟာမဲခေါင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖိုရမ်-၂၀၁၄ကို မန္တလေးမြို့ရှိ Mandalay Hill Resort Hotel တွင် ကျင်းပ
မဟာမဲခေါင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖိုရမ်-၂၀၁၄ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဖြစ်သည့် မန္တလေးမြို့တွင် (၁၁-၆-၂၀၁၄)ရက်နေ့ တွင် "ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် မဟာမဲခေါင်ဒေသ အမွေအနှစ်များ၏အနာဂတ်" (Tourism and the Future of GMS Heritage) ဟူသောဦးတည်စာသားဖြင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇွန် (၁၁) ရက် နံနက် (၉)နာရီတွင် Mandalay Hill Resort Hotel ရှိ Conference Room-1 တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ အခမ်းအနားတွင် ရှေးဦးစွာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာစိုင်းကျော်အုန်း တက်ရောက်၍ အမှာ စကားပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မဟာမဲခေါင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖိုရမ်-၂၀၀၂ ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမအကြိမ် ကျင်း ပပြုလုပ်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ ယခုအကြိမ်သည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံ ကျင်းပခွင့်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် မဟာမဲခေါင် ခရီးသွား လုပ်ငန်း ဖိုရမ်-၂၀၁၄ နှင့်အတူ (၃၃)ကြိမ်မြောက်မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို ဇွန်(၉) ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့ တွင် လည်ကောင်း၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲခရီးသွားလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းရုံး၏ အမှုဆောင် အရာရှိ ရွေးချယ် ရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အွန်လိုင်းဖြင့် ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတို့ကို ဇွန် (၁၀)ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ကျင်းပပြုလုပ်သော ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အမွေအနှစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ (UNWTO International Conference on Tourism & Heritage Protection) ကို ဇွန်(၁၂) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း (၄)ရက် ဆက်တိုက်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ကုန်တွင် ဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ် တက်လာသည့်နောက်ပိုင်း ကဏ္ဍစုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ ကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ခရီးသည်ဝင်ရောက်ခဲ့မှု (၁.၀၂)သန်း ရှိခဲ့ပြီး (၂၀၁၃)ခုနှစ်တွင် (၂.၀၄)သန်းအထိ တိုးမြင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး တိုးတက်မှုရာခိုင်နှုန်း (၉၃) ရာခိုင်းနှုန်း ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခု (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် ဇန်န၀ါရီလမှ မေလကုန်အထိ (၁၂၀၇၇၆၀)ဦး ၀င်ရောက်ခဲ့ပါကြောင်း မဟာ မဲခေါင် ဒေသခွဲ နိုင်ငံများတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များ ကြွယ်ဝခြင်း၊ အရောင်အသွေးစုံလင်ကွဲပြားသည့် ယဉ်ကျေးမှုများ ပိုင်ဆိုင် ထားခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သဘာဝအမွေအနှစ်များ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း စသည် တို့ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ဒေသခွဲဝင်နိုင်ငံများအတွက် လွန်စွာအရေးပါလှပါကြောင်း၊ မဲခေါင်မြစ်သည် ဒေသခွဲဝင်နိုင်ငံများ အားလုံး အတွက် အဓိကအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒေသခွဲနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အလေးပေးဆောင် ရွက်သွားကြမည် ဖြစ်ပါကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားသွားသည်။ ထိုနောက် ထိုင်းနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ခေတ္တ၀န်ကြီး H.E. Dr. Suwat Sidthilaw၊ ကမ္ဘာ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိ Mr. Zhu Shanzhong၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသ ခွဲခရီးသွားလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးရုံးမှ အမှုဆောင်အရာရှိ Mr. Mason Florence တို့မှ အသီးသီး အမှာ စကားပြောကြားသည်။ အခမ်းအနားသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ် ၀န်ကြီးဌာနများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲနိုင်ငံများရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီး ဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီး သွားလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်နှင့် လက်အောက်ခံအသင်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မန္တလာ ကောလိပ်ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမ့ခန့်ခွဲမှုပညာ ဒုတိယနှစ်ကျောင်း သူ၊ ကျောင်းသားများ စုစုပေါင်း (၁၇၀)ဦးကျော် တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းနောက် အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များနှင့် ဒေသထွက်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များဖွင့်ပွဲအခမ်း အနားကို ဆက်လက်ကျင်းပရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာစိုင်းကျော်အုန်း နှင့် တက်ရောက်လာသော မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲဝင်နိုင်ငံများရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်များက အရောင်းဆိုင်များအား ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင်လှစ်ပေးကြပြီးနောက် အရောင်းဆိုင်များကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု အားပေးကြသည်။ အခမ်းအနားကို အစီအစဉ်အတိုင်း ညနေ (၅)နာရီအထိ ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
Page 240 of 247 StartPrev235236237238239240241242243244NextEnd www.elicence.tourism.gov.mm
Myanmar Hotelier Association http://www.myanmarhotelier.org Myanmar Tourism Federation http://www.myanmar.travel/	You are here: Home // Latest News